Online ကနေ သင်ယူနိုင်မယ့် Mobile Software Advance အတန်းဗျို့ . Service သမား မှန်ရင် ခဏတော့ ဖတ်ကြည့်ပေးဗျို့ .. - Min Oaker
Unlabelled Online ကနေ သင်ယူနိုင်မယ့် Mobile Software Advance အတန်းဗျို့ . Service သမား မှန်ရင် ခဏတော့ ဖတ်ကြည့်ပေးဗျို့ ..
Online ကနေ သင်ယူနိုင်မယ့် Mobile Software Advance အတန်းဗျို့ . Service သမား မှန်ရင် ခဏတော့ ဖတ်ကြည့်ပေးဗျို့ ..
by Min Oaker on 11:30 AM
တဂွမ်ဂွမ် ဖုန်းဆက်ပြီး မေးနေကြတဲ့ သူအတွက် Online ကနေ သင်ယူနိုင်မယ့်
Mobile Software သင်ခန်းစာတွေ သင်ပေးမယ့် Online Training Group လေး ဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီ.
Advanced သင်ခန်းစာတွေ ပဲသင်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Basic မနိုင်ရင် မ၀င်ဖို့ ကြိုတင်အသိပေးထားပါရစေ. ..
ဟုတ်ပြီ. ကျနော် ဘာတွေ သင်ပေးမှာလဲ .ဘယ်တော့ ထိ သင်ပေးမှာလဲ . ဘယ်လို သင်ပေးမှာလဲ .
ညီအကိုတို့ဘက်ကရော သင်ကြားနိုင်ဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်လဲ. ကျနော် ပြောပြပါ့မယ်.
- Samsung ID Account Lock & FRP (Gmail ပဲတောင်းနေတဲ့ Lock) ဖြုတ်ခြင်း
Computor & Box & Dongle တွေ မလိုပဲ ဖြုတ်ခြင်း။
- Xiaomi Account Lock များ Pattern & Password Lock များ ဖြုတ်ခြင်း Computor & Box & Dongle တွေ မလိုပဲ ဖြုတ်ခြင်း , BST Dongle & MRT Dongle များဖြင့် ဖြုတ်ပြခြင်း.
- Meizu ဖုန်းတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ Firmware တင်မရခြင်း ပြသနာ ၊ Pattern & Pass Locked
ဖြုတ်မရခြင်း ပြသနာ တွေနဲ့ Meizu Flyme Account Locked ဖြုတ်ခြင်း တွေကို ပါ
- ပြီးတော့ Sony ဖုန်းတွေမှာ ကျတတ်တဲ့ MXTP Lock နှင့် အခြားသေား FRP Lock များ ဖြုတ်ခြင်း။
- Huawei ဖုန်းများ FRP Lock ကျော်ခြင်း ၊ ID Lock ကျော်နည်း ၊ Bootloader Unlock လုပ်ခြင်း။
- Huawei ဖုန်းများထဲမှ Qualcomm CPU သုံးဖုန်းများ 9008 မှBoard Firmware တင်ခြင်း၊ Board Firmware များ ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ခြင်း ၊ 9006 မှာ Block_0 Firmware ရေြးုခင်း Block_0 Firmware ကို ဖုန်းအကောင်း တစ်လုံးမှ Backup ယူခြင်း။
- Huawei ဖုန်းများထဲမှ MTK CPU သုံးဖုန်းများ အတွက် Flashtool Firmware တည်ဆောက်ခြင်း၊
Flashtool Firmware တင်ရာမှာ တွေ့လေ့ရှိတဲ့ Error များကို အသေးစိတ် ရှင်းလင်းပေးခြင်း။
- Update.app (dload) Firmware ကို SD Card မကောင်းတဲ့ ဖုန်းတွေ Slot မပါတဲ့ဖုန်းတွေကို
ကျနော်တို့ ကွန်ပျူတာကနေ ဘယ်လိုတင်မလဲ ဆိုတဲ့ အချက်တွေ.
- ပြီးတော့ Xiaomi EDl Firmware တွေကို MI Flashtool 9008 ကနေ တင်မယ် pattern,Pass Lock တွေ ဖြုတ်မယ်.
- Oppo , Vivo Qualcomm CPU သုံး ဖုန်းတွေကို 9008 ကနေ ဘယ်လို Error ကင်းကင်းနဲ့ Board Firmware တင်မလဲ.
- နောက်တစ်ခုက Samsung & Huawei နဲ့ Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ IMEI ပျောက်ပြီး
လိုင်းမတက်တာတွေ.Baseband Unknown ဖြစ်ပြီး လိုင်းမတက်တာတွေကို Box တွေ မလိုပဲ
- Huawei , Xiaomi , Oppo , Qualcomm CPU သုံးဖုန်းများ Bootlaoder Unlock လုပ်စရာမလိုပဲ CWM သွင်းခြင်း Root ဖောက်ခြင်း ။
- Xiaomi 9008 Edl Firmware ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်နည်း
- Huawei Board Firmware ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်နည်း
- MTK Display Fix , Vibrate Fix , Dead Fix File များ ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်နည်း.။
စတဲ့ သင်ခန်းစာတွေ ပါမှာ ဖြစ်ပါတယ်. ဒါတင်ပဲ လား မဟုတ်ပါဘူး နောက်နောင် update
ဖြစ်လာမယ့် Solution တွေ ဖြေရှင်းရခက်တဲ့ Error တွေကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်. Update ဖြစ်လာမယ့် Solution တွေကို ကျနော် မရခဲ့ရင်တောင် ၀ယ်ပြီး ချပြမှာပါ. ပြီးတော့ တကယ့်တကယ် ရှားပါးတဲ့ Firmware တွေ ကိုလည်း တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်. True unlock File တွေလို့ Lava Unlock ဖိုင်တွေ Board Firwmare တွေ ညီအကိုတို့ ဘက်က သာ ကျနော်ပို့ချမယ့် သင်ခန်းစာတွေကို ပိုင်နိုင်အောင်လုပ် ရင် PRO တစ်ယောက်မဖြစ်လာရင်တောင် သာမန် Service သမားထက်တော့ သာကို သာရမယ်လို့ အာမခံတယ်ဗျာ.
Member ကြေးကတော့ ၁နှစ်စာ Member ၀င်ကြေး 50000 ပါခင်ဗျာ.
တစ်နှစ်စာ 50000 ဆိုတာ ညီအကိုတို့ FRP ဖြည်ရင်ပဲ3လုံးဆို အရင်းကြေပါတယ်.
ညီအကိုတို့ ကျနော်ရဲ့ Fcaebook Online Training Group ထဲ ၀င်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
ကျနော် Min Oaker - 09257711112 ကို ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်.
Min Oaker (www.minoaker.net)
By Min Oaker at 11:30 AM